विहेपछि कट्रिना कैफको भाँडा माझ्दै, घर बढार्दै गरेको भिडियो भाइरल, फ्यानले भने भाउजु एक्लै हो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियविहेपछि कट्रिना कैफको भाँडा माझ्दै, घर बढार्दै गरेको भिडियो भाइरल, फ्यानले भने भाउजु एक्लै हो !
नयाँ दिल्ली । कट्रिना कैफ बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । भर्खरै उनले विक्की कौशलसँग विवाह गरेकी छिन् ।दुबैले आफ्नो पहिलो महिनाको उत्सव मनाए । यसै क्रममा कैफका केही पुराना भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को रूपमा सेयर भइरहेका छन्।
जसमा फ्यानहरुको विशेष प्रतिक्रिया देखिएको छ । यो भिडियोमा कट्रिना आफ्नो घरका भाँडाकुँडा धुदै गरेको देख्न सकिन्छ ।यति मात्र होइन, यसअघि पनि नायिकाको स्वीपिङको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । katrina kaif washing dishes and sweeping video viral
कट्रिना भान्साकोठामा भाँडा माझ्दै छिन् -कट्रिनाको एउटा भिडियोले इन्टरनेटमा तहल्का मच्यायो । यो भिडियोमा कट्रिना कैफ भान्साकोठामा भाँडा धुँदै गरेको देख्न सकिन्छ । त्यसपछि फ्यानहरुको विशेष प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।भाउजु यो पुरानो भिडियो हो तर अझै घरको काम के गर्नुहुन्छ ? उता अर्का फ्यानले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने– भाउजु किन एक्लै, कहाँ छौ ?
सलमान खानसँग देखिनेछ– बिहेदेखि नै कट्रिनाले सुटिङमा ध्यान दिन थालेकी छिन् । उनी विगतमा एयरपोर्टमा देखिएकी थिइन् ।हालै यी अभिनेत्रीको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ रिलिज भएको थियो, अब उनी सलमान खानसँग ‘टाइगर ३’ मा देखिनेछिन् । सलमानका अनुसार यो फिल्म गत वर्षको डिसेम्बरमा रिलिज हुनेछ ।